Ebu eriri Jointing Machine, Ebu eriri Splicing Machine - Antai
Ọ bụ a ọhụrụ ezigbo vulcanization nkwonkwo (mmezi) akụrụngwa na e ji n'ọtụtụ ebe na nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, ciment, osisi ike, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ihe, Chemicals na ndị ọzọ ndi.
Usoro ANTAI ngwaọrụ nwere ike mmekọ
Igwe maka ọrụ gị iji nyere gị aka ịkwado ego ịzụrụ nke na-enweta uru ọ bụla.
Sectional echebe Vulcanizing Press ZLJ Series Hea ...
Ejiji eriri akwa 100 p ....
Edge Mmezi Vulcanizing Press maka Rubber Nyefee ...
Nkọwa Nkọwapụta Ihe ...
Rail-n'ịnyịnya Abụọ Mmezi Vulcanizing Press maka ...
Atụmatụ: Ike dị elu ...
Model Belt obosara (mm) ...
DB-G ụdị Steel orddọ ebu echebe ekpepụsị Mach ...
Atụmatụ 1. ekpepụsị spe ...
Oyi Cold Bond maka Rubber ebu echebe Splic ...
Njirimara na-enweghị ọkụ ọkụ ...
C-mwekota Mmezi Vulcanizing Press maka Rubber Bel ...
Model okpomọkụ ...
Fechaa Vulcanizing Press maka Light Rubber ...
Model echebe (mm) Fra ...
Qingdao Antai Mining Machinery Co., Ltd. （nke a na-ezo aka dị ka Antai Company） dị na ebe mara mma Qingdao West Coast Economic Mpaghara, Antai ugbu a ghọrọ igwe na ngwa ọrụ ngwa ọrụ nke oge a nke nwere netwọkụ nke nyocha nyocha, rụpụta na echichi, mgbe ire ere mmezi, mmezi akụrụngwa na ọrụ nyocha.
Mmezi nke Vulcanizing Press
Jenụwarị / 22/2021
Dịka ihe eji ebu eriri na-ebu ebu, a ga-echekwa vulcanizer n'otu ụzọ ahụ dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ n'oge na mgbe ejiri ya ịgbatị ndụ ọrụ ya. Ka ọ dị ugbu a, igwe ọrụ vulcanizing nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ 10 ma ọ bụrụhaala na ejiri ya ma debe ya nke ọma. Ndị ...
Ngwa na mmepe nke eriri ebu
Eriri belt bụ isi akụkụ nke belt ebu. A na-ejikarị ya eme njem maka nnukwu njem na-aga n'ihu na coal, Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, kemịkalụ, ihe owuwu na mpaghara njem. A na-ekewa ihe ndị a ga-ebuba n'ime blọk, ntụ ntụ, peshị na iberibe. Ihe ndi ozo wdg.
Usoro nkwonkwo nke eriri ebu roba
N'ebe a, THEMAX ga-ewebata gị ọtụtụ ụzọ nkwonkwo eriri eriri roba. A ga-ejikọ eriri ebu ebu na akaghị tupu ya ejiri ya. Yabụ, ogo nke nkwonkwo ebu na-emetụta ndụ ọrụ nke eriri ebu na ezigbo ọrụ nke onye na-ebu ebu ...